Ny taratasy famindrana mafana dia antsoina koa hoe taratasy vita amin'ny pirinty. Ny taratasy famindrana mafana dia sosona loko fotsy eo ambonin'ny tampon'ny taratasy ifotony, voafintina sy voahodina, mizara roa sy lafiny roa. Nampiasaina indrindra ho an'ny fanontana offset, fanontana an-tariby tsara, toy ny sary alb ...
Miady miaraka amin'ny COVID-19
Mandray ny fiarovana ny mpiasa sy ny fitoniana ara-tsosialy ho andraikiny, mamaly mavitrika ny fametrahana ny firenena i Fangda, mampihatra mafy ny fepetra takiana amin'ny politika ary mandefa haingana ny hetsika. Nandritra ny fametrahana ny fepetra fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, niara-niasa ireo mpiasa ...
Fangda Core Tech – Adhesive mafana
Hot Glue dia fametaka plastika. Miova ny toetrany ara-batana miaraka amin'ny maripana ao anatin'ny mari-pana maripana iray, raha miova kosa ny fananana simika. Tsy misy poizina izy io, tsy misy fofona ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Satria ny vokatra dia mivaingana, mety amin'ny fonosana, fitaterana, fitehirizana ...